ZeBarbercue Grill elenze - China Hebei Samsung Metal wocingo
ZeBarbercue Grill elenze i
Braai hlamarile kwafakwa lifumaneka izinyithi ezahlukeneyo, ezifana steel stainless wire kwiindawo pfumerile, yesinyithi esiphakathi iqaqanjiswa wire, okanye ucingo nge welding, kwimilo ngeenxa zonke, isikwere, eziziingxande, igophe, njl zeBarbercue pfumerile kuye kwafakwa axhamle iimpawu ubushushu ngamachiza, umhlwa ukumelana, nayo engeyongozi. Sinikezela grills kwiindawo ikwimo caba kunye nemilo khaxa, xa iinkcukacha zilandelayo: 230mm, 240mm, 260mm, 270mm, 280mm, 300mm, 350mm, 400mm, 500mm. Waya kwi ndawo abathengi requiremen ezithile ...
Min.Order Ubungakanani: 5000 Piece / Pieces
Supply Amandla: 5000 Piece / Pieces Usuku nganye
Braai hlamarile kwafakwa lifumaneka izinyithi ezahlukeneyo, ezifana steel stainless wire kwiindawo pfumerile, yesinyithi esiphakathi iqaqanjiswa wire, okanye ucingo nge welding, kwimilo ngeenxa zonke, isikwere, eziziingxande, igophe, njl zeBarbercue pfumerile kuye kwafakwa axhamle iimpawu ubushushu ngamachiza, umhlwa ukumelana, nayo engeyongozi.
Sinikezela grills kwiindawo ikwimo caba kunye nemilo khaxa, xa iinkcukacha zilandelayo: 230mm, 240mm, 260mm, 270mm, 280mm, 300mm, 350mm, 400mm, 500mm. Waya kwi ndawo abathengi imfuneko ethile.
Ukuprosesa Thina grills kwiindawo njengako kubathengi iimfuno ezithile. Braai wire hlamarile kwesefu busetyenziswa kakhulu inkampu, kwakusithi-, emkhosini, ukuhamba. Braai wire hlamarile kwesefu isekelwe wire kwesefu crimped, unyango komhlaba kunye zinc wawutyabeka okanye chromium ngumfanekiswana. Braai wire hlamarile kwesefu uba umbala oqaqambileyo kunye nesakhiwo elungileyo.
Inkcazo Iinkcukacha ngolu hlobo lulandelayo:
• Material: zentsimbi Crimped wire kwesefu.
• Gqiba: Izinki camera okanye chromium ngumfanekiswana.
• Iimpawu: umbala Bright, isakhiwo elungileyo, umgangatho kumazwe angaphandle.
Le kwiindawo hlamarile iinkcukacha elenze:
ubunzima (kg / iziqwenga)
Previous: Conveyer Belt nylon
Okulandelayo: nothango nylon
Stainless Security enemingxuma
Conveyer Belt nylon